ios မှာ အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖြေတွေ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 7:20 PM | No မှတ်ချက် | ကုိုရီးယား-မြန်မာ
1. iPhone မှာ Video ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ? ဒီ App တွေကနေဒေါင်းပါ (FB Video လည်းရပါတယ်) Files - File Browser & Manager by Efrem Nebay https://appsto.re/us/qv-leb.i
QWE by Baulin Roman https://appsto.re/us/NDUW3.i
2. MP3 ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ? ဒီ App တွေကနေဒေါင်းပါ Free Music Play - Playlist Manager & Mp3 Player. by Jean McCree https://appsto.re/us/eNfWcb.i
iMusic - Free ! by Imu Sic https://appsto.re/us/bgiIab.i
3. Internet Setting ဘယ်လိုချိန်ရမလဲ? Setting > Cellular > Cellular Data Options > Cellular Data Network ထဲက အပေါ်ဆုံး Cellular Data ခေါင်းစဉ်အောက်က APN , Username နေရာမှာ MPT SimCard ဆိုရင် mptnet လို့ရိုက်ထည့်ပါ ။ Telenor/Ooredoo ဆိုရင် internet လို့ရိုက်ထည့်ပါ ။ 4. Hotspot လွှင့်တဲ့ဟာလေးပျောက်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? Setting > Cellular > Cellular Data Option > Cellular Data Network မှာ အောက်ဆုံးက Personal Hotspot ခေါင်းစဉ်အောက်က APN နဲ့ Name နေရာမှာ MPT ဆင်းကဒ်ဆိုရင် mptnet လို့ထည့်ပါ ။ Telenor/Ooredoo ဆိုရင် internet လို့ရိုက်ပြီး Back ထွက်လိုက်ပါ ။ 5. Application ဒေါင်းတာ 100MB ကျော်လို့ ဒေါင်းလို့မရဘူးတဲ့ ။ App Store မှာ 100MB ကျော်တဲ့ App တွေကို ဖုန်းအင်တာနက်နဲ့ဒေါင်းလုပ်မရပါဘူး ။ Wifi ချိတ်ပြီး (သို့) တခြားဖုန်းနဲ့ Wifi လွှင့်ပြီး ဆွဲရင် ရပါတယ် ။ 6. Reset ချတာ အကုန်ပျက်သွားမှာဆိုးလို့ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? Setting > General > Reset ထဲက အပေါ်ဆုံးက Setting Reset ချရင် ဖုန်းရဲ့ Setting တွေက Default အတိုင်းဖြစ်သွားမှာပါ ။ ဘာ Data မှ မပျက်ပါ ။
ဒုတိယနေရာက Reset All Content and Setting လုပ်ရင် ဖုန်းတစ်လုံးလုံး ရှိသမျှ Data အကုန်ပျက်ပါမယ် ။ 7. Version တင်ချင်တာ ဘယ်လိုတင်ရမလဲမသိလို့ ? Setting > General > Software Update > Check For Updates နှိပ်ပါ ။ Version အသစ်ရှိရင် ပေါ်လာပါမယ် ။ Download နှိပ်လိုက်ပါ ။ Download လုပ်ပြီးရင် Install လုပ်မလားမေးပါတယ် ။ Install Now နှိပ်လိုက်ပါ
။ 8. အတုနဲ့အစစ်ဘယ်လို ခွဲမလဲ ? အမှန်တကယ်တော့ ကြည့်ရတာလွယ်ပါတယ် ။ မကြည့်တတ်ရင်
ဒီ Website မှာ ဖုန်းရဲ့ Serial Number ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင် ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်လာပါမယ် ။ ပေါ်လာရင် အစစ်ပါ ။ မပေါ်လာရင် အတုပါ ။ 9. iCloud အကောင့် ဝင်ထားတာ ရှိမရှိသိချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? https://www.icloud.com/activationlock/ ဒီ Website မှာဖုန်းရဲ့ IMEI Number (or) Serial Number ထည့်ရင် ပေါ်လာပါတယ် ။ Activation Lock Off ဆိုရင် iCloud account ဝင်ထားတာ မရှိပါဘူး။ Activation Lock On ဆိုရင် iCloud account ဝင်ထားပါတယ် ။ 10. မြန်မာ ဖောင့် သွင်းချင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? MyFont - Myanmar Font by Hein thet Khin zaw https://appsto.re/us/cXI-Y.i ဒီ App လေးဒေါင်ပြီးရင် App ထဲမှာ Zawgyi One ကိုရွေးပါ ။ အလိုလို Setting ပေါ်လာပါမယ် ။ Install နှိပ်လိုက်ပါ ။ Keyboard ကို ဒီက ဒေါင်းပါ ။ TTKeyboard by Hein thet Khin zaw https://appsto.re/us/inf12.i ဒေါင်းပြီးရင် Setting > General > Keyboard > Add New Keyboard > Zawgyi One ကို On လုပ်လိုက်ပါ ။ 11. Firmware ရေးနေရင်း Error Code 14တက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ? Error 14က .ipsw file မှားတာကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သလို iTunes Version နိမ့်ရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ Firmware File မှန်မမှန်ပြန်စစ်ပါ ။ iTunes Version အမြင့်ဆုံးဟုတ်မဟုတ် ပြန်စစ်ပါ။
12. Jail Break မလုပ်ထားတဲ့ Device ကို Computer မပါဘဲ RingTone ဘယ်လို သွင်းမလဲ? ဒီ Post ထဲက Bro ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ ။ https://m.facebook.com/groups/181221678732531…
13. ကိုယ့် ဖုန်းက ဘယ်နိုင်ငံအလုံးလဲသိချင်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? Setting > General > About > Model ထဲက နောက်ဆုံး စာလုံးတွေနဲ့ Link မှာပြထားတဲ့ ဇယားထဲမှာ တိုက်ကြည့်ပါ ။ https://www.theiphonewiki.com/wiki/Model_Regions
14. "This charger or Accessories is not compatible..." ဘာညာပေါ်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ? Original Charger နဲ့မသွင်းဘဲ Quality ညံ့တဲ့ Copy Charger နဲ့သွင်းလို့ဖြစ်တာပါ ။ ကားမီးခြစ်ပေါက်မှာ ထိုးတဲ့ Adapter နဲ့ထိုးရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ် ။ Charger ပြောင်းသွင်းကြည့်ရင် ရနိုင်ပါတယ် ။ မရရင် Setting Reset လုပ်ကြည့်ပါ ။ 15. လိုချင်တဲ့ App က Free မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုဝယ်မလဲ? iTunes Gift Card တစ်ကဒ်ဝယ်ပါ ။ App Store ထဲက Home Page အောက်ဆုံးနားမှာ Redeem နှိပ်ပါ ။ Gift Card ကို Scan ဖတ်ပြီးရင် ရပါပြီ ။ လိုချင်တဲ့ App ဝယ်ပါ ။ 16. Reset ချပြီးပြန်တက်လာတာ Easy Touch ပျောက်သွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? Setting > General > Accessibility > Assistive Touch ကို On လုပ်ပါ ။ 17. Reset ချပြီး ပြန်တက်လာတာ Battery Level မပြတော့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? Setting > Battery > Battery Percentage On လုပ်ပါ ။ 18. Finger Print Disabled ဖြစ်သွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? Finger Print မရတော့ရင် နီးစပ်ရာ Apple Service ကျွမ်းကျင်သူကိုပြပါ ။ ကြိုးလွှတ်သွားတာဆိုရင် ပြန်တပ်လိုက်လို့ရပါတယ် ။ ပျက်သွားတာဆိုရင် ပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါ ။ အစားထိုးပစ္စည်းထည့်လို့မရပါဘူး CPU တစ်ခုနဲ့ Touch ID တစ်ခုကိုပေါင်းပြီးမှ Apple က တစ်စုံထုတ်ထားတာပါ ။ ပြင်လို့မရပါ ။ 19. Zapya နဲ့ကူးထာတဲ့ Video File ကို Camera Roll ထဲ ဘယ်လိုပို့ရမလဲ? Zapya နောက်ဆုံး Version ရှိမှ ရမှာပါ ။ ကူးထားတဲ့ Video File ကို တစ်ချက်ထောက်ပါ ။ Import ဆိုတာလေးနှိပ်ပါ ။ Importing ဆိုတဲ့ စာတန်းအနီလေးပျောက်သွားရင် ရပါပြီ
Credit to #WaiYanLuiz #TreasureMobile